Fanoherana · Oktobra, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Fanoherana · Oktobra, 2011
Tantara mikasika ny Fanoherana tamin'ny Oktobra, 2011
Ejipta: Raharaha Fampijaliana Iray Hafa Indray Taorian'ny Revolisiona
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 30 Oktobra 2011
Mitombo ny hatezerana ay Ejipta rehefa maty (voalaza fa teo am-pelatanan'ireo polisy nisambotra azy) i Essam Atta, lehilahy 23 taona nogadraina nandritra ny roa taona taorian'ny fitsarana miaramila. Lilian Wagdy dia mamintina ireo fanehoan-kevitra tamin'ny fampielezam-baovaon'olon-tsotra momba izany vaovao izany.
Global Voices Podcast : Fivoriana Fahatelon'ireo Bilaogera Arabo – Andiany faha2
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 29 Oktobra 2011
Ho fanampin'ny "podcast" isam-bolana fanaonay, dia manana raki-peo manokana ho anao koa izahay avy amin'ilay vaovao vao nivoaka farany tamin'ilay Fivoriana fahatelon'ireo Bilaogera Arabo tao Tonizia. Ao amin'ity lahatsoratra ity, fanadihadihana miaraka amin'i : Zeynep Tufekci, Alexandra Sandels, Hayder Hamzoz, ary Roger Dingeldine.
Topimason'ny Fibodoana Azia Atsimo Atsinanana
Azia Atsinanana 28 Oktobra 2011
Miely manerana an'i Azia Atsimo Atsinanana ny Hetsika ‘Fibodoana’ (na Fananihana). Aingam-panahy avy amin'ny Hetsika ‘Fibodoana’ manerantany no nisian'ny fivoriana tany Malezia, Indonezia, Filipina ary Singapore tamin'ity volana ity. Topimaso...
Ejipta: Fiantsoana Revolisiona Indray Taorian'ny Didim-Pitsarana Momba ny Raharaha Namonoana An'i Khaled Said
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 27 Oktobra 2011
Voaheloka higadra fito taona any am-ponja ny polisy roa noho ny daroka niteraka ny fahafatesan'i Khaled Said, zatovolahy novonoina tany Alexandria nampirehitra ny revolisiona Ejipsiana. Tezitra ny mpisera amin'izay lazain-dry zareo fa didim-pitsarana mohaka sy tehamaina amin'ny revolisiona sy ny antsony isian'ny rariny. Niteraka antso ho amina revolisiona vaovao teo amin'ny samy tanora ao Ejipta indray ny nandrenesana ny didim-pitsarana.
Nandoro ny voaliny sy ny folarany androany ny vehivavy Yemenita ho marika fanamelohana ny herisetra sy ny sotasotan'ny fitondrana, izay namono olona 25 nandritra ny alina tany Sanaa sy Taiz ary nikendry vehivavy tamin'ny farany teo. Hetsi-panoherana tsy misy ifandraisany amina zon'ny vehivavy na fanoherana ny voaly islamika io satria mety ho tsy azon'ny olona ilay fihetsika fa hazolava na antso vonjeo, mamely ny fitondrana
Kolombia: Nidina an-Dalambe Ny Mpiasa Sy Ny Mpianatra
Amerika Latina 26 Oktobra 2011
Volana Nisiana fifanenjanana tao Kolombia ny oktobra 2011. Nampisy fihetsiketsehana an-dalambe avokoa ny fifidianam-paritra ho avy amin'ny Alahady 30 Oktobra, ny Fifanekena Ara-barotra Malalaka miaraka amin'i Etazonia, ary ny fanavaozana ny rafi-pampianarana ambony. Tamin'ny 7 Oktobra, niantso fitokonana nanerana ny firenena ny sendikà noho ny mety ho fisiana hitsivolana maromaro tapaka izay mety...
Etazonia: Fanambin'ny Fahasamihafan'ny Hetsika “Fibodoana”
Amerika Avaratra 26 Oktobra 2011
Iray volana taorian'ny fibodoana ny faritra ara-bolan'ny tanànan'i New York, Wall Street, mihamivelatra ny hetsika ary maka toerana malalaka [an'ny fanjakana na kaominina] vaovao ny olona. Mpikatroka sy fikambanana izay niaritra - nandritra ny fotoana maharitra - ny elanelana mampisaraka ara-politika, toekarena ary sosialy no milaza ny fahatafintohinany
Siria: Ity « Tafika Mahaleotena » Mihantsy Ny Fitondrana Ity
Akanjo aro bàla, satroby vita tamin'ny Kevelar sy basy fitondra an'ady eny an-tànany, 13 lahy no mamakivaky ireo olona marobe mihorakoraka miaraka amin'ny dona kely eny an-tsoroka, fiandohan'ny volana septambra, tao an-tanànan'i Boustan al-Diwan, ao Homs. Taraiky mijery ny fanamiana ny fakantsary, ireo galona kely miloko maitso eo an-tsoroka anaty tokotany mena voatapaky ny teny hoe Al quwat al khassa (« Hery Manokana »). Ho an'ireo mafàna fo avy ao an-tanàna, goavana ny « fahazoana » ny tanàna io andro io. Ireo no miaramila Siriana niala an-daharana.